Manchester United Oo Jeex-jeexday Sawirradii Ole Gunnar Solskjaer Ee Old Trafford - Laacib
HomeWararka CiyaarahaManchester United Oo Jeex-jeexday Sawirradii Ole Gunnar Solskjaer Ee Old Trafford
Manchester United Oo Jeex-jeexday Sawirradii Ole Gunnar Solskjaer Ee Old Trafford
Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa garoonkeeda Old Trafford ka riftay sawirrada tababarihii hore ee shaqada laga caydhiyey ee Ole Gunnar Solskjaer oo hore ugu oolli jiray qaybta sare ee loo yaqaano Sir Matt Busby.
Saddex maalmood kaddib markii ay Manchester United shaqada ka caydhisay Ole Gunnar Solskjaer oo saddex sannadood oo uu joogay Old Trafford aan wax koob ah usoo hoynin, waxay bilowday hawlgal sawirradiisii lagaga nadiifinayo garoonka, isla markaana lagu tirtiranyo xasuusihiisa.
Arbacadii maanta ayaa waxa garoonka shaqo ka bilaabay saddex qof oo wata wiish dheer, waxaanay googoyn iyo jeex-jeexisay ku bilaabeen sawirrada Ole Gunnar Solskjaer ee garoonka ku yaallay.
Muuqaal lasoo geliyey baraha bulshada iyo sawirro laga soo qaaday xilligii ay saddexdan garoonka ka goynayeen sawirrada ayaa lasoo geliyey baraha bulshada, taas oo ah natiijadii ka dhalatay shaqo ka caydhinta Solskjaer.
Manchester United ayaa waxay xilka tababarenimo si ku-meelgaadh ah ugu dhiibtay Michael Carrick oo guul soo hooyey ciyaartii Villarreal ee Champions League, taas oo ay ugu soo gudbeen wareegga 16ka.
Sidaas oo ay tahay, waxay kooxdu raadinaysaa tababare kale oo ku-meelgaadh ah oo illaa dhamaadka xilli ciyaareedkan sii maamula kooxda, si xagaaga soo socda si rasmi ah shaqadan loogu dhiibo tababare kale.
Tababaraha reer Spain ee Ernesto Valverde ayaa la sheegay in wada-hadallo toos ah ay u socdaan Manchester United ayna u dhow yihiin heshiis uu ku noqonayo tababaraha ku-meelgaadhka ah ee ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka.